(SAWIRRO) Xaflad sanad guuradii 19-aad ee aasaaskii dawladda Puntland oo lagu qabtay Finland. | puntlandi.com
Monday, August 7th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRRO) Xaflad sanad guuradii 19-aad ee aasaaskii dawladda Puntland oo lagu qabtay Finland.
Xaflad si heer sare loo soo qabanqaabiyey oo lagu xusayey sanadguurada 19-aad ee aasaaskii dawladda Puntland ayaa lagu qabtay Helsinki, caasimadda dalka Finland.
Xafladda oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Puntland ee dalka finland, waxaa ka soo qaybgalay dhammaan qaybaha bulshada soomaaliyeed: Aqoonyahanno, siyaasiyiin, isimo, haween, xubno ka socday dawlad goboleedyada soomaaliyeed iyo fannaaniin.
Ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha jaaliyadda Puntland ee dalka Finland Mudane Xirsi Axmed cali ” Geenyo “, wuxuu ugu horeyntii hambalyo u diray dhammaan shacabka Puntland. Keddib, wuxuu u mahadceliyey dadkii ka soo qeybgalay Xafladda.
Guddoomiyuhu wuxuu munaasabadda ka sheegay, in loo baahan yahay in waxgaradka iyo aqoonyahannada reer Puntland, iyagoo isku duuban, ay aqoontooda iyo waaya-aragnimadooda kaga qayb qaataan horumarka, wadajirka, nabadgelyada, dawlad iyo maamul-wanaagga iyo xasiloonidda Puntland.
Keddib waxaa waxaa halkaasi ka hadley xubno matalayey qaybaha kala duwan ee martidii ka soo qeybgashay xafladda sanadguurada 19aad ee aasaaskii dawladda puntland. Waxaana laga sheekeeyay taariikhda dawladda Puntland – Markii la aasaasay iyo heerarkii ay soo martay. Intii ay Xafladaasi socotay waxaa halkaas laga qaaday heeso wadani ah. Xafladaasi oo aad u quruxbadneyd oo aheyd middii ugu ballaarneyd oo lagu qabto dalkaan finland waxay ku soo dhammaatay jawi farxadeed. Sawirrada Xafladda hoos ka daawo.